Reachli: Shabakada Xayeysiinta Muuqaalka | Martech Zone
Isniin, February 25, 2013 Isniin, February 25, 2013 Douglas Karr
Waxaan wadaagnay nidaamyo talo bixinno kale ah sida Daawadan. Ka waran haddii nuxurkaagu uusan ahayn mid qoraal ahaan ku jira dabeecadda, in kastoo, oo ay tahay muuqaal muuqaal ah - sida tigidhada, sawirada macluumaadka, sawirada iibka, wicitaan-ku-dhaqaaq ama sawirro Reachli waa shabakad xayaysiis muuqaal ah.
Reachli wuxuu leeyahay in ka badan 70,000 xayeysiiyayaal in ka badan 3.5 milyan oo aragti ah bishiiba! Reachli wuxuu leeyahay teknolojiyad labo-iyo-ciyaar lahaansho ah oo adeegsanaya erayga muhiimka ah, macnaha guud, iyo algorithms u dhigma sawirrada si uu isugu geeyo wixii sawir ah ee jira ee ku jira websaydhka xayeysiiska ugu habboon ee ku lug leh. Iyo haddii aad tahay daabacaad leh taageerayaal aad u fiican bartaada iyo xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada, Reachli ayaa kaa caawin kara inaad lacag siiso bulshadaas.
Waad ku mahadsan tahay kooxda HCCMIS, a caymiska safarka shirkad ahaan, si aan maanta farta ugu fiiqo barta. Kooxda suuq-geynta ee halkaas waxay ka qabtaan shaqo aan caadi aheyn kobcinta waxyaabaha muuqaalka ah iyo helitaanka jawaab weyn! Iyagu waa suuqley B2C casri ah oo tijaabiya oo cabira wax kasta oo ay qabtaan.
Tags: network xayeysiiyahashabakadda xayeysiintapublishergaarixayaysiis muuqaal ahtusmada muuqaalka